ESI EDEBANYE AHA NA ỤLỌ AHỊA PLAY - GWUO AHIA - 2019
Esi edebanye aha na Ụlọ Ahịa Play
Hewlett-Packard bụ otu n'ime ndị na-emepụta ihe ntanetị nke ụwa. Ọ meriri ebe ya n'ahịa ọ bụghị nanị n'ihi nnukwu ngwaọrụ dị elu maka igosipụta ederede na nkọwa ihe ọmụma maka ibipụta akwụkwọ, mana kwa maka ngwọta ngwanrọ dị mfe maka ha. Ka anyị lelee ụfọdụ mmemme a ma ama maka ndị na-ebipụta HP ma chọpụta atụmatụ ha.
Otu n'ime akwụkwọ ndị a ma ama site na Hewlett-Packard maka edezi na ijikwa ihe oyiyi dị na ntanetị di iche bụ Photo Image Photo. Ngwaọrụ a na-arụkọ ọrụ na ndị na-ebipụta ụlọ ọrụ a, dịka ọ nwere ike iji mee ngwa iji zipu ihe oyiyi iji bipụta. Ma isi ọrụ ya ka nhazi nke foto n'onwe ha.
Ị nwere ike ijikwa ma lee foto dị iche iche (ihuenyo zuru ezu, otu, ngosi ngosi) na mmemme a site na iji njikwa faili dị mfe, ị nwere ike ịgbanwe ha site na iji nchịkọta ahụ wuruwu. O kwere omume ịkpụgharị foto ahụ, gbanwee ọdịiche, ihe ọkụkụ, wepụ mmetụta nchara uhie, tinye nza. Aloof bụ ikike ịmepụta ma bipụta ọba site na ikesa foto n'ime ndenye ntọala.
N'otu oge ahụ, ekwesịrị ịdebe na, ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ndị nchịkọta akụkọ zuru oke na ndị nchịkọta foto foto nke oge a jiri ya, foto foto na-efunahụ arụmọrụ. Ihe omume a enweghi interface asụsụ Russian, ọ dịwo anya a na-ewere ya na ọ dị ntakịrị ma ndị na-arụpụtaghị akwado ya.
Download foto foto mpaghara
Maka izipu ozi ntinye ederede sitere na ngwaọrụ Hewlett-Packard na netwọk, ngwa Digital Sending bụ ihe kacha mma. Site na ya, ọ ga-ekwe omume ịmepụta ihe dị na akwụkwọ na ọtụtụ usoro mgbasa ozi (JPEG, PDF, TIFF, wdg), wee ziga ozi natara na netwọk mpaghara, site na e-mail, faksị, site na Microsoft SharePoint ma ọ bụ bulite na ebe nrụọrụ weebụ Njikọ FTP. Ihe niile ezitere zitere site na SSL / TLS. Tụkwasị na nke a, ngwá ọrụ a nwere ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ, dịka nyochaa arụmọrụ na ndabere.
Ma ngwa ngwa a kachasị mma maka ịrụ ọrụ site na Hewlett-Packard, ọ nwere ike inwe nsogbu mgbe gị na ndị na-ede akwụkwọ na scanners na-emekọrịta ihe. Na mgbakwunye, ndị ọrụ nwere ịzụta ikikere maka ngwaọrụ ọ bụla ejikọrọ.
Nbudata nzipu ozi
Usoro ọzọ maka ịchịkwa ngwaọrụ ngwaọrụ sitere na Hewlett-Packard bụ Web Jetadmin. Iji ngwá ọrụ a, ị nwere ike ịchọ ma jikọta ngwaọrụ niile LAN na otu ebe, melite ngwanrọ ha na ndị ọkwọ ụgbọala, hazie ọnụọgụ dị iche iche, dozie nsogbu na oge, ma mee ụfọdụ mgbochi iji gbochie malfunctions.
Tụkwasị na nke ahụ, onye ọrụ ahụ nwere ike nyochaa ọrụ ahụ, nakọta data na ịkọ akụkọ. Site na njirimara nke akụrụngwa akụrụngwa aha, ị nwere ike ịmepụta profaịlụ onye ọrụ ma nye ha ọrụ ụfọdụ. Otu n'ime isi ọrụ Dzhetadmin Dzhetadmin bụ na-ebipụta nchịkwa, nke dị mfe na ọnụnọ nnukwu ọdụdụ.
Enwere ike ịkọwa ihe ndị na-adịghị mma maka usoro ihe omume dị mgbagwoju anya maka onye ọrụ ọhaneze iji rụọ ọrụ na ya. N'oge enwere nani nsụgharị nke na-arụ ọrụ nanị na sistemụ arụmọrụ 64-bit. Na mgbakwunye, ibudata ngwa a, dị ka ọtụtụ ngwaahịa ndị ọzọ Hewlett-Packard mepụtara, ị ga-edebanye aha na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị.
Wepu Web Jetadmin
Enwere ezigbo ngwa maka ijikwa ndị na-ebipụta Hewlett-Packard. Anyị kọwapụtara naanị obere akụkụ nke ndị kasị ewu ewu. Nke a dị iche iche bụ n'ihi eziokwu ahụ bụ na ngwa ndị a, ọ bụ ezie na ha na otu ụdị ngwaọrụ ahụ na-emekọrịta ihe, mana n'otu oge ahụ na-arụ ọrụ dị iche iche. Ya mere, mgbe ị na-ahọrọ ụdị ngwá ọrụ, ọ dị mkpa ịghọta ihe ị ga-achọ maka ya.